Ndeapi matanho akanakisa ekugadzira yako ecommerce? | ECommerce nhau
Ndeapi matanho akanakisa ekugadzira yako ecommerce?
Ecommerce, inozivikanwawo seyekutengesa zvemagetsi, ndeye yakasarudzika bhizimusi modhi kuburikidza neInternet kana online commerce. Uye ane chiitiko chei chinosanganisira kutenga nekutengesa zvigadzirwa kana masevhisi, zvigadzirwa kana zvinyorwa kuburikidza nenzira dzemagetsi, senge masocial network nemamwe mapeji ewebhu yemhando dzakafanana. Nekukosha kukuru mumakore achangopfuura sezvo iri bhizinesi modhi inosarudzwa nechikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati.
Asi mune zvese zviitiko iwe unofanirwa kuziva kuti ecommerce kana emagetsi commerce chikamu chinonyanya kuve nekuparadzira, kutengesa, kutenga, kushambadzira uye kuendesa kweruzivo nezve zvigadzirwa kana masevhisi kuburikidza neInternet. Nemazhinji mabhizinesi miches nekusaisa pfungwa pachikamu chimwe chete chekambani yedhijitari. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe une chakakura chinopihwa kubva kwaunogona kugadzira yako yaunofarira nyanzvi chiitiko.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuziva kuti ndeapi mamwe emhando yepamusoro emabhizimusi mamodheru eecommerce yako. Zvekuti nenzira iyi iwe unogona kuve nerinofungidzira zano pamusoro pekuti ndeipi fomati yekumisikidza ino yakakosha online bhizinesi chiitiko. Bata maruva ese, kubva pane zviitiko zvemitambo kuenda kuchikamu chemafashoni, kuburikidza nekutengesa kwezvinhu zvikuru. Iwe unoshaiwa chero chinhu zvekuti kubva ikozvino uchigona kuzvipira iwe kune ichi chiitiko mubhizinesi redhijitari.
1 Mabhizinesi mamodheru: dzimwe nzira dzekutanga
2 Ndeapi matunhu aunogona kusarudza kuchitoro chako chepamhepo?
3 Zvinodikanwa zvinofanirwa kupihwa niches yebhizinesi
4 Mamwe mazano aunogona kupa kune yako e-commerce
Mabhizinesi mamodheru: dzimwe nzira dzekutanga
Ehezve, mikana haisi kuzoshaikwa kubva zvino zvichienda mberi. Iwe haugone kuve nekukahadzika pamusoro peizvi, sezvo iwe uchaona pazasi peiyi ruzivo. Mupfungwa yekuti inovhara zvakasiyana siyana zvebhizimusi zvirevo zvemarudzi ese uye kuti pasina kupokana anokwanisa kugutsa zvaunoda munzvimbo ino yehupenyu hwehunyanzvi. Iwe unoda kuziva kuti rako ramangwana rinogona kunge riri online kana dijitari chikamu? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti urwu ruzivo runogona kukupa iwe inopfuura rimwe zano rehunyanzvi kubva zvino zvichienda mberi.
Iyo yemabhizimusi modhi uko kudyidzana kunoitwa zvakananga pakati pevatengi. Iyo ine zvakawanda zvakanaka pamusoro pevamwe uye imwe yeakanyanya kukosha ndiko kukura kwayo kukuru mumisika. Mune mamwe mazwi, ine yakakura kwazvo mikana yekukura, zviripakati nepakati nepakati refu. Uye zvakare, inopa kudzikisira kwakakura mukutungamira uye kushambadzira mutengo uye ichi chinhu chaunofanira kufunga pakutanga kwekusimudzira kwaro nekuti hauzodi mari yakawanda semamwe mafomu edigital. Ndichiri kune rimwe divi, iwe uchagara uine nzvimbo yakakura yekutengesa zvigadzirwa, zvinyorwa uye masevhisi aunogadzira kubva kune yako online chikuva.
Bhizinesi - ku- Mutengi
Iri kirasi rebhizimusi iro rinotarisisa zvakanyanya pane zvido zvevatengi uye rinozivikanwa kupfuura zvese nemutengo waro wakaderera wezvivakwa. Zvichava zvinonakidza kwazvo kana iwe usiri kuda kuita kuburitsa kukuru pakutanga kwechiitiko chehunyanzvi. Imwe yehunhu hwayo hwakakosha irimo pakuti iyi fomati rebhizinesi rakavakirwa pahukama hwakanyanya pakati pemakambani nevatengi. Kune rimwe divi, iyo inobvumidza vatengi nyaradzo yakakura kuita yavo nzira yekutenga. Nekuda kwekuguma uye mushure meizvozvo isu takatarisana nebhizinesi kana chitoro chaicho neicho ichi chinoratidza kune wese munhu.
Icho chingangove chakaomesesa kune vezvemabhizimusi venguva yemberi kuti vanzwisise nekuda kwekuti akawandisa maanoshanda akapindirana mukugadzirwa. Zvakanaka, mune zvakajairika mazwi, ndiyo yemagetsi commerce modhi mairi iri yekupedzisira mutengi uyo anozopedzisira agadza mamiriro ekutengesa kumakambani. Mupiro waro unogara mukuti inobvumidza mamiriro ari nani kuwanikwa mupiro yakapihwa nemakambani. Ndokunge, musiyano wakakura pamusoro pemafomati apfuura uye izvo zvinogona kukufadza pane dzimwe nguva.
Ndeapi matunhu aunogona kusarudza kuchitoro chako chepamhepo?
Sezvo kupihwa kwakakura kwazvo uye kwakazara zvakasiyana, kunyangwe mune chero mamiriro ezvinhu isu tiri kuzokupa iwe mamwe mazano kuti iwe ugone kuahodha kubva zvino zvichienda mberi. Mune zvikamu zvakasiyana zvezviitiko zvehupfumi hwenyika. Semuenzaniso, iwo atinokufumura pazasi:
Zvipo uye zvishandiso chikamu
Icho chimwe chezvikamu zvemadhijitari zviri kuwedzera mumakore achangopfuura uye izvo zvinovakirwa pachokwadi chekuti iwe unogona kupa kugona kusvika kumagumo mutengi mukutarisana nekukura kudiwa kubva kune vatengi. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvinogona kugadzirwa kuburikidza neInternet uko imwe yekiyi yekuzadzisa zvinangwa iri mukupa zvigadzirwa zvepakutanga uye zvitsva, asi pamusoro pezvose kuburikidza neakasiyana uye akasiyana mazano.
Zvigadzirwa zvakabatana nemitambo
Iko kufarira kwevagari vezvemitambo maitiro kuri kuwedzera uye nekudaro iwe unogona kutora mukana weiyi maitiro mune tsika yevaSpanish. Uye zvakare, iwe une zvakawanda zvingasarudzwa uye bhizimusi niches kusarudza kubva: mbatya dzemitambo, zvishongedzo zvekudzidzira zvemitambo kana audiovisual zvinhu kutsanangura zvavanofanira kuita. Asi iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuva nechinhu chimwe chinodiwa: rudo rukuru rwemitambo uye zvese zviitiko zvinogona kugadzirwa. Hazvishamise kuti iri chiitiko chehunyanzvi chinomira pakuve nyanzvi mune zvemamiriro mazhinji.
Zvingaitwe sei neimwe nzira, imwe yeimwe nzira mukati mekutengesa zvemagetsi ndiyo ine chekuita nekutengesa zvigadzirwa uye zvinyorwa zvakabatana nechizvarwa chizvino chezvinhu zvehunyanzvi. Asi iwe unofanirwa kuve unovandudza zvakakwana mune izvo iwe zvaunoraira kune vese vatengi. Mupfungwa yekuti zvichave zvakakosha kuti iwe upe sevhisi kana chigadzirwa chakasiyana nemakwikwi. Kunyangwe kupinzwa kubva kunzvimbo dzenzvimbo uko matekinoroji epamberi akagadzirwa. Inogona kuve nzvimbo yekusiyanisa kuitira kuti kubva ikozvino uwedzere kutengesa kwako pakati pevatengi kana vashandisi.
Zvinyorwa zvine chekuita nevakadzi fashoni
Ivo vanogamuchirwa nevazhinji nevatengi uye ivo vari kuwedzera kusarudza kwekutenga pamhepo, sezvakaratidzwa mumishumo yazvino kubva muchikamu. Naizvozvo, ivo vanogona kuve mukana webhizinesi kana iwe uchiziva nzira yekufambisa zvishuwo zvevanhu ava. Kuziva nguva dzese ndezvipi zvinoitika zvenguva yekupedzisira. Ndokunge, ndiani wavanotenga, ndezvipi zvavanotsvaga zvakanyanya pamapeji ewebhu kana avhareji yemari yavanoshandisa mune aya mashambadziro. Kusvika padanho rekuti inogona kuve chinongedzo pakati penzvimbo yedhijitari nevatengi, ichipa iyo yazvino novelty inopihwa nemisika.
Zvinodikanwa zvinofanirwa kupihwa niches yebhizinesi
Muzviitiko zvese, zvichave zvakakosha kuti iwe upe hunhu hunodiwa nemabhizimusi edhijitari maunogona kuzvipira kubva ikozvino zvichienda mberi. Zvichava zvakakosha kuti iwe uvaongorore nekuti ivo vanokwanisa kukupa inopfuura pfungwa imwe nezve izvo zvaunofanirwa kuita munguva dzino chaidzo. Semuenzaniso, iwo anoratidzwa pazasi:
Ivo vanofanirwa kuve zvigadzirwa, masevhisi, zvinyorwa zvinoisa maitiro uye izvo zviri zvechokwadi zvine hunyanzvi kune avo vekupedzisira vanogamuchira.
Mukana wekupa yakakwira-kusvika-zuva zvinopihwa nemitengo, panguva imwechete yekukwikwidzana kutarisana nemaitiro ekutengeserana ezvitoro zvepanyama.
Koshesa kuti pakupera kwezuva iwe unenge uine yakaderera mutengo wezvivakwa kumakambani uye izvo zvinogona kukubatsira iwe kuita kuvandudza kweiyi bhizinesi chirongwa iwe iwe yauri kumirira kuvhura pamusika kuti ibatsire nenzira iri nani.
Yeuchidza chimwe chikamu cheichi chiitiko kuti utenge zvive nyore uye nekukurumidza kubva chero kupi, kuvonga kuchitoro chepamhepo iri kukosha kwakawedzerwa kwemhedzisiro isingaverengeki kune vese vashandisi kana vatengi.
Iyo chaiye, uye kwete utopian, chokwadi chesimba kushamwaridzana zvakananga nevatengi vekupedzisira. Ichave mumwe mupiro unogona kukuunzira imwezve bhenefiti kuti iwe ugone kubudirira mune yedhijitari chikamu chekutengeserana
Kufungidzira kune chikamu, kuti kunyangwe kana iri incipient, iva neramangwana rakanaka kwenguva yepakati uye kunyanya yakareba. Iko kunodiwa chaiko nevatengi vezvigadzirwa kana masevhisi.
Mamwe mazano aunogona kupa kune yako e-commerce
Kupedzisa tiri kuenda kukupa imwe imwe pfungwa yekuunza kuzadzikisa aya mazano atakataura muchinyorwa chino. Iwe unoda here kuvafungidzira nenzira inoshanda?
Kuva kutambira zvikumbiro izvo zvinokupa iwe nevanhu vanobudirira kwazvo muindasitiri.
Ziva zvese nhau dziri kugadzirwa mumusika uye kuti iwe unogona kuendesa kune yako emagetsi commerce.
Bvunza vamwe vanhu zvine utsinye hwakakura pabasa ravo uye mushumo nezve chii chinonzi kudiwa kwevatengi mune yega yega yezvikamu zvemadhijitari.
Pamusoro pazvose, zvinokurudzirwa kuti usarudze a hutsva hwakakwana chikamu mune izvo zvaunofunga kune vese vatengi.
Uye pakupedzisira, shingairira mumabasa ako kubva panguva yekutanga iwe yaunotanga yako yehunyanzvi chiitiko online.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Ndeapi matanho akanakisa ekugadzira yako ecommerce?
Ndiani chaiye ecommerce mutengi?
Mienzaniso mishanu yekutengesa email